Maxay tahay sababta Faylasha PST ee Muuqaalka u yihiin Musuqmaasuq?
Bogga ugu weyn > Products > DataNumen Outlook Repair > Maxay tahay sababta Faylasha PST ee Muuqaalka u yihiin Musuqmaasuq?
Muuqaalka waa most macmiilka emaylka ee sida weyn loo adeegsado ee ku jira Windows world. Si kastaba ha noqotee, faylasha xogta Outlook PST sidoo kale waxay u nugul yihiin musuqmaasuq. Sababta Hoos waxaan ku falanqeyn doonaa sababaha iyo xalka u dhigma.
1. Microsoft ma bixiso qaab wax ku ool ah oo looga hortago musuqmaasuqa faylka PST
Midka koowaad iyo most muhiim ayaa ah in Microsoft aysan bixin qaab wax ku ool ah oo looga hortago musuqmaasuqa, sida soo socota:
Qaabka faylka PST laftiisu ma laha muuqaal ka hortagga musuqmaasuqa, sida diiwaanka soo kabashada sida WinRAR .RAR Qaabka arjiga ama bogga durdurka sida ku jirta SQL Server .MDF database. Iyada oo leh diiwaanka soo kabashada ama bogga durdurka, marka qayb ka mid ah xogta la musuqmaasuqo, way fududahay in laga soo kabsado iyaga oo la yareeyo fursadaha xogta luminta 90%.
Faylka PST way fududahay in la musuqmaasuqo markii cabirka faylka uu kordho, mana jiraan farsamo looga hortago si otomaatig ah. Muuqaalka ma isticmaali doono faylal badan si uu si toos ah ugu kaydiyo xogta marka cabirka faylka uu weyn yahay. Isticmaaluhu wuxuu u baahan yahay inuu gacanta ku sameeyo. Dabcan, most dadka isticmaala ma ogaan doonaan tan. Muuqaalka kaliya ee la xiriira ee Muuqaalka ayaa ku kallifaya adeegsadaha inuu keydiyo emaylladii hore, laakiin muuqaalkan dheg uma dhigin cabirka feylka.
Muuqaalka Muuqaalka, ma jiro muuqaal otomaatig ah oo loogu talagalay faylka PST. Haddii Muuqaalka Muuqaalka noocaas ahi lahaa, markaa haddii faylka PST musuqmaasuq yahay, xitaa haddii aan la soo kaban karin, mid ayaa lagu soo celin karaa nuqul hore oo nuqul ah, kaas oo ku jiri doona most ee xogta ugu dambeysa haddii keydka la sameeyo toddobaad kasta.
Microsoft waxay bixisaa qalab soo kabasho oo bilaash ah PST oo loo yaqaan iskaanka, oo la socda Outlook. Si kastaba ha noqotee, waxay hagaajin kartaa oo keliya faylka PST oo leh musuqmaasuq yar. Haddii waxyeelada ama musuqmaasuqu aad u daran yahay, markaa scanpst wuu ku fashilmayaa most kiisaska.
2. Dad badan ayaa ku xadgudba faylka PST:
Muuqaalka waa mid caan ah oo ay jiraan dad badan oo isticmaala maalin kasta. Kuwo badanina waxay ku takri-falaan faylka PST taas oo ka dhigaysa mid u nugul musuqmaasuqa:
Maalmahan sababtoo ah kororka emayllada iyo macluumaadka kale ee shakhsiga ah, cabirka faylka PST ayaa si aad ah kor ugu kacay. Laga soo bilaabo dhowr GBs maalmaha hore, in ka badan 20GB ama xitaa 50GB. Ka weyni waa faylka PST, sida ugu fudud ee uu u kharribmayo. Dhaqan wanaagsan oo lagu maareeyo xogta ballaaran ayaa ah in loo kala qaybiyo dhowr faylal yaryar oo PST ah, tusaale ahaan, ku keydi emaylkii hore faylalka la galiyay PST, si loo hubiyo in cabir kasta oo faylka PST ah <= 10GB, halkii aad ka isticmaali lahayd feyl aad u ballaaran oo PST ah.
Qof ayaa xiri doona kumbuyuutarka markii faylka PST uu wali furo shirkadda Outlook, taas oo waliba sababi doonta musuqmaasuq.
Qof ayaa ku keydin doona feylasha waaweyn ee PST-ga shabakada wadista, taas oo aan lagugula talin maadaama feylka PST laftiisa loogu talagalin tan. Wayna fududahay in sababo musuqmaasuq markaad marin uhesho faylka PST ee shabakada.
Faahfaahin dheeraad ah oo faahfaahsan oo ku saabsan dhaqamada wanaagsan si looga hortago musuqmaasuqa faylka PST ayaa laga heli karaa https://www.datanumen.com/prevent-pst-corruption/
Sida loo dayactiro faylasha PST ee musuqmaasuqay:
Haddii musuqmaasuqa faylka PST uu dhaco, markaa marka hore waxaad isku dayi kartaa bilaash iskaanka, maaddaama ay tahay aaladda rasmiga ah ee ay bixiso Microsoft si loogu hagaajiyo faylasha PST ee kharribmay, waana bilaash. Haddii aysan shaqeyn, markaa waad isku dayi kartaa DataNumen Outlook Repair.